Ukucwiliswa ixesha elide kunye nemfihlo kwi-jacuzzi okanye ukuntywila kwi-plunge pool kunye neqela lemigulukudu? Ubomi bukunika ukhetho olunzima e-El Lago Villa! Ukuhlehlisa ukwenza izigqibo ngokujonga iindlela zendalo ebumelwaneni kuqala, okanye uhlale ngasechibini ujonge imbonakalo entle yeeNduli zeAravali.
Iingokuhlwa apha zichithwa kakuhle uhleli kwindawo yomlilo kwaye uzonwabisa ngesidlo esosa inyama.
Khetha i-El Lago Villa ngenxa yobuntofontofo bayo bale mihla phakathi kobuhle, ubume bendalo.
El Lago Villa ikhethekileyo ngenxa yayo
-Indawo phakathi kweAravali Hills
- Ukusondela echibini
-Ijenereyitha, iAC, ihitha, iWiFi
-Ikiti yeBarbecue, ibha, umlilo ovuthayo
-Indawo yokupaka ekhuselekileyo ukuya kuthi ga kwiimoto ezi-3
Le yipropathi ehambelana nesitulo esinamavili, kwaye ilungele izilwanyana zasekhaya.
- Kukho amagumbi okulala ama-4 kumgangatho osezantsi.
- I-AC, i-WIFI, i-kettle yombane kunye neendawo zokuhlambela eziqhotyoshelweyo zinikezelwa kuwo onke amagumbi.
- Onke amagumbi aneebhedi zobukhulu bokumkani.
- Kukho amagumbi okuhlambela ama-4 kwi-villa - zonke zincanyathiselwe.
- IJacuzzi inikezelwa kuwo onke amagumbi okuhlambela.
- Kukho amagumbi okuhlala ama-2.
- Igumbi lokuhlala kumgangatho osezantsi lihlala abantu aba-5 kwaye lowo ukwindawo engaphantsi kwezihlalo ukuya kwi-4.
- Omabini amagumbi okuhlala anika i-AC kunye neTV.
- Kukho amagumbi okutyela ama-2 anika indawo yokuhlala ekhululekileyo ukuya kuthi ga kwi-5 kunye ne-6 yabantu ngokulandelelanayo. Baxhotyiswe nge-AC.
- Kukho i-12,000 sq. ft lawn ene-gazebo.
-Inokuhlala ukuya kuthi ga kwi-150 abantu ngalo naliphi na ixesha.
-Inokuhlala ukuya kwiindwendwe ezingama-50 nangaliphi na ixesha.
- Kukho idama lokutsiba.
- Iqula liyi-15x6 ft ngobukhulu kunye ne-4 ft ubunzulu.
- Ikhitshi lixhotyiswe nge-oven, isitovu segesi, isihluzo samanzi, umatshini wokuhlamba izitya, i-toaster, i-induction plate, ifriji kunye ne-microwave.
- Ikhitshi inokusetyenziswa kuphela ukwenza iti, ikofu, ii-noodles ezikhawulezayo okanye ukutya okusisiseko kweentsana. Noko ke, ukupheka ngobuyokoyoko akuvumelekanga.
ISixeko saseLakes, i-Udaipur sisithsaba selizwe laseRajasthan, eboshwe yi-Aravalli Hills ukusuka macala onke. Ngobuninzi bobuhle bendalo obuphindaphindwa ngumzamo womntu, i-Udaipur yenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zinomtsalane kakhulu ukutyelela. Ke ngelixa ukonwabela ukuhlala kwakho obutofotofo e-El Lago, nazi iindawo ezimbalwa ezikufutshane kunye nemisebenzi esiyicebisayo ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke ngakumbi.
-Chitha ixesha elithile loxolo kufutshane neLake Pichola
Umamkeli ukhona kwipropati kwaye uhlala efikeleleka. Umnakekeli oqeqeshiweyo nonoxanduva ukhona kwipropathi ukusombulula naziphi na iinkxalabo kwaye akuncede ube nokuhlala ngokugqibeleleyo.